Njalo owesifazane ubona fashion show, yesikhulumi, lapho ukusebenzisa imodeli ne sibalo ephelele, bakulungele ngokushesha give up amazambane athosiwe, chops soda, ukuze ube afana enhle! Kodwa konke so simple? Ingabe kwanele ukumane nje azibulale noma ube indlela eqinisekile ukuze kulekelelwe elamukelekile? Eqinisweni, kukhona indlela yokudla ehambisana nempilo eziningi ezahlukene, ezifana onobuhle Ukudla, kodwa iningi lawo ingozi empilweni, ngakho kukhethwa indlela ethile kwesisindo kufanele wasondela nangengqondo ukukhetha kahle ukuthi evumelana nawe, hhayi okuyinto eye yasiza ukuba ulahlekelwe isisindo the udoli edume kunazo zonke ezake isikhathi!
Uma siqala isifundo eningiliziwe lo mbuzo, kuba sobala ukuthi ngaphezu 'nendlala isiteleka ", kukhona uhlobo olukhethekile lokudla, okuyinto ngokufanele ngokuthi - imodeli Ukudla. It has ezimbili: ngosuku nantathu noma wezinsuku eziyisikhombisa. Zombili lezi ukuhlukahluka zibukhali kakhulu, kungukuthi Kunconywa ukuba aphule, uma siqala - ukwenza ngokwezwi lakho. Kodwa udinga ukuba ukukhuthazela futhi ube namandla amakhulu yentando, ezinhle futhi impilo yakho isibuthaka.
Cabanga ukhetho lokuqala: ukudla izinsuku ezintathu. Le ndlela yenza kube lula ukuqeda ezine khilogremu, uvame esetshenziswa show kubaluleke kakhulu, noma eminye imicimbi. Kuyini a ezifana amaphetheni Ukudla? Zonke izinsuku ezintathu we ekudleni esifanayo, ayikwazi ukushintshwa. Ekuseni, uvunyelwe ukuba ukudlele iqanda elilodwa kuphela okokuqala kudingeka ukupheka kanzima abilisiwe. Ngemva esiphezulu amahora amabili nesigamu kuza kwasemini, ungakwazi manje udle engaphezu kwengu-125 amagremu ephansi fat cottage shizi no ingilazi yamanzi noma inkomishi yetiye ngaphandle ushukela, uju kanye nezinye amaswidi. Lokhu "ukudla" kufanele liphindwe kwasemini, okuyinto eza ngemuva kwamahora amabili nesigamu. Mayelana kwakusihlwa, ungakwazi ukukhohlwa kulezi zinsuku ezintathu futhi ayizange izame ngisho nokuzama ukukhumbula, udinga ukuthi ucabange ngalokhu Imiphumela!
Njengoba sekushiwo, amaphethini ukukhetha ukudla kungase kube masonto onke. Ingqikithi le ndlela ukunciphisa inani kilojoule nsuku zonke. Ngoba usuku lonke, isamba kumele singeqi uphawu 1000. Kodwa-ke kubalulekile ukukhumbula ukuthi udinga baphuze ketshezi ngangokunokwenzeka (itiye ngaphandle ushukela, amanzi). Lokhu kuzosiza ukuba ahlanze umzimba, ukuhoxisa ubuthi imfucuza ndaba. On the khona ushukela kungenziwa ukhohliwe.
Ngakho kanjani udinga ukudla? On the kwasekuseni kufanele igcine amaqanda amabili, kanzima abilisiwe, noma 50 amagremu inyama ebomvu. Njengoba ibhonasi, ungakwazi ukwengeza nocezu omnyama isinkwa, okuyinto nivame ungqimba ezondile ibhotela, isiphuzo itiye eliluhlaza, noma amanzi evamile abilisiwe afudumele anosawoti. I ibhulakufesi wesibili siqukethe kuphela amanzi noma itiye, akukho okunye ayikwazi ukusetshenziswa.
Lokho kudla onobuhle ivumela dinner zithokozise 300 amagremu isaladi uhluke kubhontshisi ezivamile, uphizi oluhlaza futhi isipinashi, ayoliswe kalamula, amagremu 100 izinhlanzi izinhlobo ephansi fat noma inyama. Elimnandi - kancane izithelo, kudingeka babe elungisiwe. Geza phansi lokho? Kunjalo, amanzi noma itiye ngaphandle ushukela. Ngezinye kwasemini - kuphela ketshezi njengoba ibhulakufesi yesibili. Isikhathi sokugcina ngosuku ukudla kungakapheli ngehora lesikhombisa kusihlwa. Dish kanje: zimbili iineyi zoburotho abamnyama, linanikhulu lema-300 amagremu imifino eluhlaza (nakanjani fresh) plus itiye / amanzi.
Cishe 9 pm, ungaphinda itiye ntambama. Le modi kuyadingeka ukuze agcine ngeviki. Uma unezinkinga zempilo noma ungaqiniseki ukuthi hang on the ngesonto, kungcono ukushiya leli ibhizinisi futhi uthole indlela enomusa ngaphezulu ukunciphisa umzimba.
Ukudla onobuhle - uvivinyo lwangempela ngoba umzimba, ngoba uma kukhona ngisho inkinga kancane nge esiswini noma ezinye izitho zokugaya, imiphumela ingaba ezibucayi. Kuleso simo, uma umzimba uphilile futhi ulahlekelwe isisindo kufanele kube, kulapho umbukiso ngakwesokudla ngemva kwezinsuku ezimbalwa - ukudla izinsuku ezintathu ukusiza. Sidinga Imiphumela obukhulu kakhulu? Ingabe futhi akuyona inkinga, sihlala phansi ngeviki futhi ujabulele ukudla ngemiphumela!
Ukulwa cellulite ekhaya. Amathiphu zokupheka
Indlela ukupheka ikhofi green kwesisindo: imithetho kanye namathiphu
Lapho ukuqala ukudla okuqinile: ukufundisa ingane ukuba ukudla omdala
Indlela ukukhetha imishini for aquarium?
Indlela yokwenza Mead uju ubudala: iresiphi ekhaya
Kanjani ukushintshela kwesokudla imifino?
Kabardino-Balkarian Republic: dolobha ezikhangayo